यूटीआई (मूत्र पथ संक्रमण) को १ 15 घरेलु उपचार एकलकेयर - कल्याण | सेप्टेम्बर 2021
समाचार, कल्याण कम्पनी कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार औषधि बनाम मित्र समाचार स्वास्थ्य खेलहरु कल्याण समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा
मुख्य >> कल्याण >> यूटीआई रोकथाम र उपचारको लागि १ home घरेलु उपचार
मूत्र पथ संक्रमण (यूटीआई) एउटा छाता शब्द हो जसले माथिल्लो मूत्र पथको संक्रमणलाई समेट्छ - जसमा सम्भवतः मृगौला (पाइलोनेफ्राइटिस) - साथै तल्लो मूत्र पथको पनि हुन्छ, जसमा मूत्राशय (सिस्टिटिस) समावेश छ। यूटीआई शब्द धेरै जसो तल्लो मूत्र पथमा संलग्न संक्रमणहरूसँग आदानप्रदानको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, जुन सामान्यतया मध्यम हल्का मध्यम दुखाइ वा असुविधाको रूपमा देखा पर्दछ। यी यूटीआईहरूले पेशाब गर्दा जटिल संवेदनाहरू निम्त्याउन सक्छ, मूत्र त्याग वा आवृत्तिको भावना, र श्रोणि दुखाइ; अधिक गम्भीर संक्रमणको कारण पीडा, ज्वरो, मतली, र / वा बान्ता हुन सक्छ। जहाँ औषधिहरूले चाँडै यूटीआईको उपचार गर्न सक्दछ, धेरै व्यक्तिहरूले उनीहरूको यूटीआई लक्षणबाट राहत पनि पाउँछन् घरेलू उपचारको साथ। युटीआई को लागी केहि सब भन्दा लोकप्रिय घरेलु उपचारहरु हेरौं।
यूटीआईको लागि १ home घरेलु उपचार (मूत्र पथ संक्रमण)
जब ब्याक्टेरियाले मूत्र पथ प्रणालीमा प्रवेश गर्दछ, यसले मूत्र पथ संक्रमण हुन सक्छ। ब्याक्टेरिया, र विशेष गरी Escherichia कोलाई (ई। कोलाई), हो यूटीआई को सब भन्दा साधारण कारण , तर डिहाइड्रेशन, लामो समयसम्म पेशाब राख्नु, केही स्वास्थ्य अवस्था, र हर्मोनल परिवर्तनहरूले पनि यूटीआई निम्त्याउन सक्छ वा तपाईंको संक्रमणको जोखिम बढाउन सक्छ। औसत यूटीआई केहि दिन देखि एक हप्ता भन्दा बढि सम्म रहन सक्छ। केहि यूटीआईहरू आफ्नै हिसाबले टाढा जान्छ, तर अधिक गम्भीर मामिलाहरू (जस्तै माथिल्लो मूत्र पथमा ती संक्रमणहरू) लाई चिकित्सा उपचार आवश्यक छ। एन्टिबायोटिक उपचारको साथ, धेरै धेरै गम्भीर यूटीआई भएका मानिसहरूलाई एक भित्र राहत महसुस गर्न थाल्छ केही दिन । हल्का यूटीआईको लागि, घरेलू उपचारले लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ, र / वा संक्रमणलाई विकास हुनबाट रोक्न सक्दछ।
यहाँ युटीआई को लागी केहि सामान्य घरेलु उपचारहरु छन्।
सही रूपमा मेटाउनुहोस्
कपासको अंडरवियर लगाउनुहोस्
साबुनहरू स्विच गर्नुहोस्
मासिक प्याड, टेम्पन्स, कप प्राय: परिवर्तन गर्नुहोस्
गर्मी लागू गर्नुहोस्
क्रैनबेरी रस पिउनुहोस्
धेरै लसुन खानु
चिनी कम खाऊ
प्रोबायोटिक्सको साथ पूरक
जडिबुटी उपचार प्रयास गर्नुहोस्
सावधानीका साथ आवश्यक तेलहरू प्रयोग गर्नुहोस्
१ सही तरिकाले सफा गर्नुहोस्
घरमा यूटीआईहरू रोक्नको लागि उत्तम चीजहरू मध्ये एक सफा र सकेसम्म सफा रहनु हो। अगाडिबाट पछाडि सफा गर्दै पेशाब गरेपछि वा मल त्याग्दा ब्याक्टेरियालाई मूत्रमार्गमा छिर्न र मूत्र पथमा यात्रा गर्नबाट बचाउँछ।
२) कपासको लुगा लगाउनुहोस्
प्राकृतिक फाइबरले बनेको अण्डरवियर लगाउनुहोस् यो सुनिश्चित गर्न कि मूत्रमार्ग सकेसम्म सफा र सुख्खा रहन्छ ब्याक्टेरिया प्रवेश रोक्नको लागि। धेरै कडा भएको लुगा लगाउनुले युरेथ्रामा एयरफ्लो रोक्न सक्छ। वायुप्रवाह बिना, ब्याक्टेरियाले प्रवेश प्राप्त गर्न सक्दछ र वातावरणमा प्रजनन गर्न सक्दछ जुन एक यूटीआई को विकासलाई अनुमति दिन्छ। नायलॉन जस्तो कृत्रिम फाइबरले बनेको कपडा लगाउँदा ओसिलो पासो हुन्छ, ब्याक्टेरियाको बृद्धि हुन सक्छ।
के औषधिहरु रक्सी को लागी एक गलत सकारात्मक हुन सक्छ
Shower. नुहाउनु हुँदैन
मूत्र पथमा कुनै पनि ब्याक्टेरियाको उपस्थितिको मतलब संक्रमणको उपस्थिति होइन; राम्रो ब्याक्टेरिया छ र एक स्वस्थ सन्तुलन कायम गर्न को लागी महत्वपूर्ण छ। खराब ब्याक्टेरियाको साथसाथै डचिंगले यस राम्रो ब्याक्टेरियाहरूलाई हटाउन सक्छ र तपाईंको शरीरको पीएच सन्तुलन परिवर्तन गर्न सक्दछ। अन्ततः यसले खराब ब्याक्टेरिया फस्टाउन अनुमति दिन सक्छ। योनीले डिस्चार्ज मार्फत आफैलाई सफा गर्छ। यदि तपाईं अझै पनि त्यहाँ धुनु आवश्यक महसुस गर्नुहुन्छ भने, pH सन्तुलित सूत्र प्रयोग गर्नुहोस् ग्रीष्मकालीन हव्वा ।
Switch. साबुनहरू स्विच गर्नुहोस्
तपाईंको बबल नुहाउने, शरीर धुने, र अन्य सफाई उत्पादनहरू हुन सक्छ तपाइँको UTIs लाई अपराधी । संवेदनशील फार्मुलाहरू प्रयोग गर्नुहोस् जुन रye्ग र खुशबू-रहित छन्।
Men. मासिक प्याड, ट्याम्पन, वा कप प्राय: परिवर्तन गर्नुहोस्
कम शोषक प्याडहरू सिंथेटिक सामग्रीले बनेको ब्याक्टेरियामा तपाइँको भल्भा उजागर गर्न र तपाइँको संक्रमण को जोखिम बढाउन सक्छ। ट्याम्पनहरूको प्रयोगले ब्याक्टेरियाहरूलाई छिटो विकास गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ, त्यसैले तपाइँको ट्याम्पन नियमित रूपमा परिवर्तन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। टेम्पन्स र मासिक कपहरू सक्छ तपाईको जोखिम बढाउनुहोस् एक यूटीआई पाउने वा बिग्रँदो यदि यो सही स्थितिमा छैन भने। यदि यो तपाईंको मूत्रमार्गमा धकेल्छ र तपाईंको मूत्रमा फस्छ भने, ब्याक्टेरिया ब्लेडरमा फैलिन सक्छ। मासिक कपको आकार वा आकार परिवर्तन गर्दा आवर्ती यूटीआई रोक्न मद्दत गर्दछ।
Sp. शुक्राणुनाशकबाट बच्नुहोस्
शुक्राणुनाशक जन्म नियन्त्रणको एक प्रकार हो जुन योनीमा शुक्राणु मार्न अघि राखिएको हुन्छ। शुक्राणुनाशकहरूले जीवाणुहरूको आक्रमणबाट सुरक्षाको प्राकृतिक अवरोधहरू हटाउँदा (र अन्ततः संक्रमण) हटाउन सक्छ। यूटीआईको अनुभव लिदै शुक्राणुनाशकबाट बच्न सिफारिस गरिन्छ। थप रूपमा, सेक्स भन्दा पहिले र तुरुन्त पछि पेशाब गर्न सक्दछ यूटीआई रोक्न मद्दत गर्नुहोस् ।
यूटीआई भएमा पब्लिक क्षेत्रमा असुविधा वा पीडा हुन सक्छ। तातो प्याड वा तातो पानीका बोतलहरूले त्यस क्षेत्रमा पीडा कम गर्न मद्दत गर्दछ र प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। लगभग १ minutes मिनेटको लागि श्रोणि क्षेत्रमा गर्मी लागू गर्दा ठूलो फरक पार्न सक्छ। तापक्रम एकदम तातो छैन र गर्मी स्रोतले छालालाई सीधै स्पर्श गर्दैनन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नाले कुनै पनि जलन वा जलनबाट बचाउनेछ। तातो नुहाउनु यूटीआई दुखाई कम गर्न तार्किक समाधान जस्तो लाग्न सक्छ, तर प्रायः स्वास्थ्यकर्मीहरूले बुलबुले नुहाउने बिरूद्ध सल्लाह दिन्छन्। यदि तपाईं नुहाउनुहुन्छ भने, साबुन र सुड हटाउनुहोस् र तपाईंले सोच्ने समयको मात्रा सीमित गर्नुहोस्।
यूटीआई को लागी एक उत्तम घरेलू उपचार भनेको धेरै पानी पिउनु हो। प्रशस्त पानी पिउँदा शरीरबाट फ्लस ब्याक्टेरिया मद्दत गर्दछ। हार्वर्ड स्वास्थ्य औसत स्वस्थ व्यक्तिले कम्तिमा चार देखि छ कप कप पानी पिउन सिफारिस गर्दछ।
Ran। क्रेनबेरी जुस पिउनुहोस्
जब ब्याक्टेरियाले मूत्र पथमा सेलको पर्खालमा संलग्न हुन्छ, यसले मूत्र पथमा संक्रमण हुन सक्छ। प्रोनथोसाइनिडिन्स, जुन क्रैनबेरी जुसको सक्रिय तत्त्व हो, यसले ब्याक्टेरियालाई मूत्र पथमा पर्खालमा छिर्न रोक्न मद्दत गर्दछ, जसले यूटीआईलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। द्वारा एक अध्ययन जैव प्रौद्योगिकी जानकारी को लागी राष्ट्रिय केन्द्र भन्छन् कि क्रैनबेरी जुसले यूटीआईको संख्या कम गर्दछ एक व्यक्तिले १२ महिना भन्दा बढीमा विकास गर्न सक्दछ।
यूटीआईको उपचार गर्न अनवेन्टन क्रैनबेरी ज्यूस पिउनु मेडिकल समुदायमा अत्यधिक बहसको विषय हो। जुस पिउँदा केही मानिसहरूलाई मद्दत पुर्‍याउन सक्छ, यसले अरूको लागि काम गर्दैन। क्रैनबेरी जुसको उनकी यूटीआईको उपचारमा स्थान छ वा छैन भन्ने निर्णय गर्न यो प्रत्येक व्यक्तिमा अन्ततः हुन्छ।
१०. प्राय: युरेनेट
प्राय: यूटीआईको अनुभव गर्दा पिसाब गर्नाले ब्याक्टेरियाहरूलाई फ्लसबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ। पेशाब गर्ने चाहनाको प्रतिरोध गर्दा मूत्राशयमा फसाउने ब्याक्टेरिया राख्न सक्छ जसले यूटीआईलाई अझ नराम्रो बनाउन सक्छ। संभोग गर्नु भन्दा पहिले र पसाल पिसाब गर्नाले मूत्रमार्गमा प्रवेश गर्ने ब्याक्टेरियाहरूको मात्रा कम गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
११. धेरै लसुन खानुहोस्
उपभोग गर्दै लसुन तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई प्रबर्धन गर्न उत्तम तरिका हो, र लसुन यसको जीवाणुरोधी र एन्टिफंगल गुणहरूको लागि परिचित छ। एलिसिन, लसुनको यौगिकहरु मध्ये एक हो, एन्टिमाइक्रोबियल गुणहरू छन् प्रभावकारी साबित ई। कोलाई मार्दा।
१२. चिनी कम खान्नुहोस्
डाईट यूटीआई को रोकथाममा ठूलो हुन सक्छ किनकि यो ब्याक्टेरिया संक्रमणको कारणले हुन्छ सारा Emily Sajdak , DAOM, न्यूयोर्क शहरमा एक्यूपंक्चर र परम्परागत चिनियाँ चिकित्सा को एक डाक्टर। ब्याक्टेरिया चिनी मन पर्छ, त्यसैले अधिक चिनी तपाईं खान, अधिक तपाईं संक्रमण खुवाँने छ।
१.. प्रोबायोटिक्सको साथ पूरक
प्रोबायोटिक्स राम्रो ब्याक्टेरियाहरूको पूरक हो जसले स्वस्थ पेट र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मद्दत गर्दछ। तिनीहरूले फलफूल हुनबाट र हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूलाई राख्न मद्दत गर्दछ उपचार र रोकथाम बारम्बार मूत्र पथ संक्रमण। प्रोबायोटिक ल्याक्टोबासिलस विशेष गरी महिलाको लागि यूटीआई रोकथाममा प्रभावकारी साबित भएको छ।
त्यहाँ धेरै फरक छन् प्रोबायोटिक्स को प्रकारहरु किराना स्टोर वा स्वास्थ्य खाद्य स्टोरहरूमा खरीदका लागि उपलब्ध। यदि तपाइँ तिनीहरूलाई यूटीआईको लागि लिन चाहानुहुन्छ र कुन प्रकारको लिनुपर्दैन थाहा छैन भने, तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक वा फार्मासिष्टसँग कुरा गर्नुहोस्।
१ her. जडिबुटी उपचार प्रयोग गरी हेर्नुहोस्
Uva ursi एक जडिबुटी हो जसमा एन्टी-इन्फ्लेमेटरी, कसैले र मूत्र एन्टीसेप्टिक गुणहरू छन्। Uva ursi छ प्रभावशाली देखाइयो उपचार र यूटीआई रोक्न मा। यो स्वास्थ्य फूड स्टोरबाट किन्न सकिन्छ र पोषण विज्ञ वा हेल्थकेयर प्रोफेशनल द्वारा निर्देशन अनुसार लिनु पर्छ।
Uva ursi को थपमा, Sajdak निम्न प्राकृतिक पूरकहरूको सिफारिश गर्दछ UTIs लाई रोक्नको लागि:
डी-मन्नोज चिनीको एक प्रकार हो जसले ब्याक्टेरियालाई मूत्र पथको भित्तामा टाँस्नबाट जोगाउन मद्दत गर्दछ। केहि अध्ययन देखाउनुहोस् कि पानीको साथ डी-मन्नोज पाउडर सेवनले यूटीआईहरू रोक्न मद्दत गर्दछ, विशेष गरी जो मानिसहरूलाई बारम्बार प्राप्त गर्छन्।
सबै जडिबुटी पूरकहरू स्वास्थ्यसेवा पेशेवरको परामर्शमा लिनुपर्दछ, किनकि तिनीहरूले अन्य औषधिहरूसँग कुराकानी गर्न सक्छन् जुन तपाईं अन्य संकेतहरूको लागि लिदै हुनुहुन्छ।
१.. आवश्यक तेलहरू सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुहोस्
Oregano आवश्यक तेल राम्रोसँग यसको बलियो एन्टिब्याक्टेरियल गुणहरूको लागि परिचित छ। अध्ययनले देखायो कि ओरेगानो तेल मार्न धेरै प्रभावकारी हुन सक्छ ई। कोलाई , तर यो ध्यान राख्नु पर्छ यी अध्ययनहरू प्राय: गरिन्छ कृत्रिम परिवेशीय- अर्थ प्रयोगशालामा वैज्ञानिक प्रविधिहरूको प्रयोग गरेर, संक्रमणमा मानवमा प्रदर्शन गरिएको छैन। लेमनग्रास तेल र लौंग तेल यूटीआईको लागि उनीहरूको एन्टिमाइक्रोबियल गुणहरूको कारण घरेलु उपचार पनि हुन सक्छ, तर दुबै ओरेगानो तेल जस्तो प्रयोगहरूमा हानिकारक ब्याक्टेरियाको बिरूद्ध अध्ययन गरिएको छ।
उपचारको रूपमा आवश्यक तेलहरू प्रयोग गर्नु अघि सावधानी अपनाउनु महत्त्वपूर्ण छ। को होलिस्टिक एरोमाथेरापीको लागि राष्ट्रिय संघ सल्लाह दिन्छ बिरूद्ध यी तेलहरू पचाउन। यसको सट्टामा, आवश्यक तेलहरू सुरक्षित रूपमा एक वाहकको तेलको साथ प्रयोग गर्न सकिन्छ वा डिफ्युजरबाट श्वास लिन सकिन्छ।
यदि घरेलु उपचारले तपाईंको यूटीआईलाई मद्दत गरिरहेको छैन भने, तपाईंलाई एक ओभर-द-काउन्टर वा प्रिस्क्रिप्शन औषधी आवश्यक पर्दछ। ओभर-द-काउन्टर नोन्स्टेरॉइडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी औषधिहरू, जस्तै एडविल, मोट्रिन, र नेप्रोसिन [प्रदान गर्दछ] लक्षण राहत, भन्छन् डेभिड सामदी , एमडी, ल Long आइल्याण्डको सेन्ट फ्रान्सिस अस्पतालमा पुरुषहरूको स्वास्थ्य र urologic oncology को निर्देशक। त्यहाँ ओटीसी औषधिहरू पनि छन् AZO मूत्र दुखाई राहत वा युरिस्टेट ट्याब्लेटहरू जसको मुख्य घटक हो फेनाजोपायरिडिन , जसले मूत्र पथमा जलन कम गर्न मद्दत गर्दछ, तर यसले कारणको उपचार गर्दैन।
प्रिस्क्रिप्शन यूटीआई उपचारमा सामान्यतया एन्टिबायोटिकको एक पाठ्यक्रम लिनु समावेश हुन्छ, जुन शरीर भित्र ब्याक्टेरिया संक्रमण मार्ने काम गर्दछ। यूटीआई को लागी लोकप्रिय एन्टिबायोटिक शामेल छ अमोक्सिसिलिन , साइप्रस , र ब्याक्ट्रिम ।
सम्बन्धित : Amoxicillin बारे सिप्रोको बारेमा | ब्याक्ट्रिमको बारेमा
यूटीआईको उपचार गर्न कसैले एन्टिबायोटिक लिने दिनहरू फरक हुन्छन्। कुनै पनि एन्टिबायोटिकको सम्पूर्ण निर्धारित खुराक लिनु अत्यावश्यक छ, यदि तपाईं राम्रो महसुस गर्न थाल्नुभयो भने पनि। एन्टिबायोटिकको पाठ्यक्रम सुरुमै रोक्नाले सबै ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न सक्दैन, जुन कारण हुन सक्छ एन्टिबायोटिक प्रतिरोध ।
केहि मानिसहरू जो बारम्बार यूटीआईहरू छन् एन्टिबायोटिक प्रोफेलेक्सिसबाट फाइदा लिन सक्छ , एक उपचार विकल्प जहाँ एन्टिबायोटिकले एक उपचारको सट्टा संक्रमणलाई रोक्छ। यूटीआई उपचारको लागि प्रयोग गरिएको उही औषधिहरू रोकथामको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, यद्यपि खुराक फरक हुन्छ। एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर एक उचित मामला मा एक मामला दर मामला आधार मा खुराक र औषधि को फार्म निर्धारित गर्न सक्छन्। हेर्नुहोस् यो लेख यूटीआई औषधिहरूको बारेमा बढी सिक्न।
जब एक यूटीआई को लागी एक डाक्टर को लागी
सँधै तपाईको प्राथमिक उपचार चिकित्सकमा तुरून्त जानुहोस् यदि यूरिनमा रगत छ भने, यदि तपाईलाई ज्वरो आएको छ, र / वा तपाईको यूटीआई लक्षणको साथ कम पीठमा दुखाई छ, Sajdak सल्लाह दिन्छ। यूटीआई चाँडो सार्न सक्दछ, त्यसैले यो जानु उत्तम छ… ढिला भन्दा पछि।
यद्यपि प्राकृतिक उपचारहरू यूटीआई लक्षणहरू कम गर्न र रोक्नको लागि लाभदायक हुन सक्छ बारम्बार यूटीआई , तिनीहरू संक्रमणको उपचारमा प्रभावकारी नहुन सक्छन्।
यदि लक्षणहरू अझै तीन दिन पछि पनि रहिरहन्छ भने यो समय एन्टिबायोटिकमा जानको लागि समय हो, भन्छ आइभी Branin , ND, न्यूयोर्क शहरका एक प्राकृतिक चिकित्सक जसले महिलाको स्वास्थ्यमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्छन्। म प्रायः बिरामीलाई उनको युएक्टर (मूत्र विश्लेषण) को लागि डाक्टरलाई भेट्न सल्लाह दिन्छु र एन्टिबायोटिकहरूको पर्ची मात्र पर्दछ र तीन दिन पछि पनि सुधार नभएमा यसलाई भर्दछ।
एक यूटीआई उपचार नगरी छोड्दा थप स्वास्थ्य समस्याहरू हुन सक्छ। ब्याक्टेरिया यूरेटर वा मिर्गौलामा पुग्न सक्छ र मृगौलामा संक्रमण हुन सक्छ। समयमा उपचार नगरिएका यूटीआईहरू गर्भावस्था सम्भावित रूपमा प्रारम्भिक श्रम र कम जन्म वजन पनि निम्त्याउन सक्छ। टाढा जाँदैन कि UTI को लागी उपचार खोज्नु back वा फिर्ता आउँछन् — जहिले पनि राम्रो चीज हो।
लेवाक्विन भनेको के हो र यो केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
flonase र nasacort बीच के फरक छ?
जब बच्चाहरु एलर्जी को लागी परीक्षण गर्न सकिन्छ
के सामान्य रक्त शर्करा स्तर मानिन्छ
वयस्कहरुमा गम्भीर कब्जियत को लागी घरेलु उपचार
टाउको चिसो भीड कहिले सम्म रहन्छ?